China Mbubata & Mbupụ Fair Online | Lelee huaihaiglobal.com ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | Huaihai Holding Group
Ugbu a, ka anyị bido nke mbụ Canton Fair 2020 , anyị bụ huaihai riƙe otu, nke e guzobere n’afọ 1976, etolitewo n’imepụta mba ọhụrụ na-eji obere ugbo ala, azụmaahịa na azụmaahịa, imepụta ụgbọala na ọrụ mmezi dị ka ngalaba ọrụ ya mgbe afọ 40 nke mmepe na-aga n’ihu. Yahuaihai na zongshenụdị ndị a ma ama ama ama na China, Mmepụta na ọnụ ahịa ahịa nke obere ụgbọ ala karịrị nde iri abụọ nke na-eme ka anyị bụrụ onye okike nke ndekọ akụkọ ụwa Guinness. Site na ntọala nrụpụta na xuzhou, tianjin, chongqing na wuxi esenidụt, e guzobela ndị enyemaka 20 na ngalaba dị iche iche ma n'ụlọ ma na mba ọzọ. Ebugharị ngwaahịa anyị na mba na mpaghara 86 karịa. Vehiclesgbọala anyị bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị chụpụrụ ụwa. Nke a bụ naanị ntinye okwu dị nkenke, ọ bụrụ na ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ na ngwaahịa anyị, ị nwekwara ike lelee weebụsaịtị anyị:www.huaihaiglobal.com.
Ihe na-esote ya bụ akụkụ ụyọkọ taa-iwebata njem pasili tuk-Q5N. 127th Canton Fair
Tụnyere na J3A, Q5N bụ ngagharị ịnya ụgbọ elu, ogo ya pere mpe, ma sie ike, ọ bụ kpochapụla ụzọ aghụghọ, ọ dị mfe ma bụrụ ihe ịtụnanya, a na-ekekọta ihe dị n'ihu, bụ ihe na-akpụ akpụ, nke siri ike ma na-adịgide, anyị na-ebubata ụdị ngwaahịa a. ka Afrịka, South America na Ndịda Eshia, ihe ngosi a na - adi elu, na anwu n’igwe di na onodu ndi a, otutu ndi ahia anyi gha eji ahia a dika taxi iji kpata ego, ya mere ha gha agbapu ubochi ubochi niile, ndi shied nwere ike iguzo onye ori ahu site n’onye ugboala. mmiri na ikuku nke na - eme ka ha nwekwuo ahụ iru ala mgbe ha na - enweta ego. Nke ahụ bụ otu uru na onye ahịa dị ka ya. Ka anyị hụ ọkụ, ihu ugo abụọ na-acha uhie uhie na-eme ka ụgbọ ala ahụ dịkwuo ike.Canton Fair Buyer
Tụnyere na J3A, Q5N bụ usoro ịnya ụgbọ elu, nha ya pere mpe, ma sie ike, ọ bụ ya kpochapụwo tricycleihe owuwu, ihe di nfe ma di egwu, a na-atunye ihu onyunya di n’iru, bu ihe eji akpukpo ukwu dikwa, dikwa ike ma dikwa ogologo, anyi na ebupute udiri ahia a n’Efrika, South America na South Asia, onyonyo a na adi elu, na onwu di n’uwa. ihe ndị a, ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị ga-eji ngwaahịa a dị ka tagzi iji kpata ego, yabụ na ha ga na-egwu mmiri ụbọchị niile, ndị shied nwere ike ịmị onye ọkwọ ụgbọ ala n'ụdị anwụ, anwụ na ikuku nke na-eme ka ha nwekwuo ahụ iru ala mgbe ha na-enweta ego. Nke ahụ bụ otu uru na onye ahịa dị ka ya. Ka anyị hụ ọkụ, ihu ugo abụọ na-acha uhie uhie na-eme ka ụgbọ ala ahụ dịkwuo ike.